राष्ट्रपतिमा फेरि भण्डारी « Janata Samachar
राष्ट्रपतिमा फेरि भण्डारी
भण्डारीलाई २९,२७५ र रार्इलार्इ ११, ७३० मत प्राप्त
प्रकाशित मिति : 13 March, 2018 5:32 pm
काठमाडौं । मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी दोहोरिनु भएको छ । राष्ट्रपतिको लागि मंगलबार भएको निर्वाचनमा भण्डारी विजयी हुनुभएको हो ।
वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नु भएकी भण्डारीलाई २९ हजार २ सय ७५ मत प्राप्त भएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नु भएकी कुमारीलक्षमी राईले ११ हजार ७ सय ३० पाउनु भयो ।
निर्वाचनमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यले मतदान गरेका थिए । राष्ट्रियसभाका ५९, प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० गरी कुल ८ सय ८४ जनाले राष्ट्रपति छानेका हुन् । यी मध्ये केन्द्र र प्रदेशका सांसदहरुको मतभार फरक–फरक थियो ।
नेकपा एमालेको तत्कालीन उपाध्यक्ष भण्डारी २०७२ साल कात्तिक ११ गते गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्नु भएको थियो ।
२०१८ साल असार ५ गते भोजपुर जिल्लामा आमा मिथिला पाण्डे तथा बाबु रामबहादुर पाण्डेको कोखमा जन्मिएकी भण्डारी विद्यार्थी जीवनदेखि नै कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो ।
भण्डारी २०३७ मा महेन्द्र मोरङ्ग बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरको स्ववियू कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुनु भएको थियो । विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टीको समेत जिम्मेवारी लिएपछि उहाँले केही वर्ष भूमिगत जीवन समेत बिताउनु भयो । उहाँको भूमिगत अवस्थामै २०३९ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेका नेता मदन भण्डारीसँग विवाह भयो । विवाहपछि उहाँ २ सन्तानको आमा बन्नु भयो र त्यसपछि केही वर्ष गृहणी जीवन बिताउनु भयो ।
२०५० साल जेठ ३ गते दासढुंगा जीप दुर्घटनामा पति जननेता मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनापछि पार्टीले उहाँलाई पुन राजनीति सक्रिय बनायो । मदन भण्डारी २०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौ क्षेत्र १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई करिब ७ सय मतअन्तरले पराजित गरेर चर्चामा आउनु भएको थियो ।
मदनको निधनपछि काठमाडौं १ मा उपनिर्वाचन भयो । त्यो निर्वाचनमा एमालेले विद्यालाई उम्मेदवार बनायो । चुनाव प्रचारप्रसारमा सेतो सारीमै डुलाइयो । त्यो बेला पनि कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई नै उम्मेदवार बन्नु भएको थियो ।
कांग्रेस नेता भट्टराइलार्ई विद्याले मदनको भन्दा अझ बढी मतअन्तरले पराजित गर्नु भएको भट्टराईलाई मदनले करिब ७ सय मत अन्तरले पराजित गर्नु भएको थियो, विद्याले करिब ११ सय मत अन्तरले पराजित गर्नु भएको थियो ।
त्यसपछि उहाँले राजनीतिक सक्रियता बढाउन थाल्नु भयो । उहाँले लामो समय एमालेको भगिनी संगठन अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्नु भएको थियो । २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको एमालेको छैठौं महाधिवेशनमा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बन्नु भयो ।
आठौं नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । गणतन्त्र आएपछि रक्षामन्त्री बन्नु भयो । २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उहाँ समानुपातिकबाट सभासद हुनु भएको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति बन्नु भयो ।
भोजपुरकै बेहेरेश्वर प्राथमिक विद्यालयबाट शिक्षा आरम्भ गर्नु भएकी भण्डारीले भोजपुर बाटै एस एल सी उत्तिर्ण गर्नुभयो । भोजपुरमा बाट आइ ए को अध्ययन पुरा गरी महेन्द्र मोरङ्ग बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा बि.ए.उत्तीर्ण गर्नु भएको छ ।
संसदीय राजनीतिमा होमिएको २२ वर्षमा नै राष्ट्रपति बन्न सफल हुनु भएकी भण्डारीले अझै कम्तीमा ५ वर्ष मुलुकमा राष्ट्रनायकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कमल थापाको चिन्ता
पुष्पराज अधिकारी हेटौंडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले केपी ओली सरकार दुई तिहाइ
नेपाली कांग्रेसको आर्थिक प्रतिवेदन पारित, बैठक भोलिपनि बस्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आगामी महासमिति बैठकमा पेश हुने आर्थिक प्रतिवेदन पारित भएको छ ।
बाबुरामको ‘ट्वीट’मा ताली भन्दा गाली बढी !
काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सोमबार गरेको ट्वीटमा
‘विश्वले मानवअधिकार स्वीकारेको छ’
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापनापछि विश्वले मानवअधिकार हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गरेको
कांग्रेस २४ वर्षपछि ब्युँझियो, राम्रै भोः…
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाई सरकार छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना बढी भइसकेको…
जनता टेलिभिजनमा आज प्रसारण हुने कार्यक्रम तालिका यस्तो छः Janata Television Live Youtube Streaming
त्यो ९ महिना र यो ९…
अमेरिकामा जर्ज वासिङ्गटनले, ‘दुईपटक भन्दा बढी राष्ट्रपति नबनौँ है’ भने, त्यही थिति बस्यो । जुन–जुन देशले थिति बसाउन खोजे र…
को हुन् ‘चन्द’ ? निर्मला हत्यामा…
काठमाडौं । १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या अनुसन्धान साघुँरो हुँदै गएको बताएको प्रहरीले शंकास्पद तीन जनाको डिएनए सार्वजनिक गर्ने तयारी…
मणि खम्बुको कुरा सुन्दा अध्यक्षद्वयलाई आइलाग्यो…
काठमाडौं । सचिवालय बैठककाे लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का चार शीर्ष नेता शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । समयमै पुग्ने नेताहरु…
एसपी बिष्टले खोले रहस्य–‘एकहोरो चुट्दै रहे, म चुटिँदै गए’
निर्मला हत्या प्रकरण प्रवक्ता सुवेदीले मुख खोले
‘समात्न खोज्दै थियौँ, पूजा हामफालिन्’
भूकम्पमा १० लाख मान्छे मर्ने अनुमान
भोलि र पर्सी सार्वजनिक विदा
१६ दिने अभियान अन्तर्गत अन्तरक्रिया
ए डिभिजन लिग: मनाङको अपराजित यात्रा कायमै
‘गोठमा बस्दाको पीडा बिर्सियौँ’
विवाहपञ्चमीको चौथो दिनः तिलकोत्सव
वाकयुद्धमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली
© 2018 Janata Samachar